ဒူဘိုင်းမွေ့လျော် | နိုင်ငံတကာလှည့်လည် & အားလပ်ရက်ပက်ကေ့
ဒူဘိုင်းမွေ့လျော် - ဒူဘိုင်းခရီးစဉ်ပက်ကေ့
04 Nights / 05 နေ့ရက်များ
| tour Code ကို:, G-5020
ဟိုတယ်တွင်-in ကို Check, အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အပန်းဖြေမှာတစ်နေ့တာ၏ကျန်ဖြုန်းနေကြတယ်။
ညဦးယံ၌ဟိုတယ်ထဲကခေါင်းနှင့်မောလ်များထွက်စစ်ဆေးပါ။ သငျသညျတခုစစ်မှန်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှအတွေ့အကြုံကိုချင်တယ်ဆိုရင်, Bur ဒူဘိုင်း၏များစွာသော Souk ၏တဦးတည်းသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ဒါ့အပြင်အနီးအနားမှာယင်း၏ပွနျလညျထူထောငျရိုးရာအိမ်များနှင့်လေတာဝါတိုင်များအတွက်ကျော်ကြားသည့်သမိုင်းဝင် Bastakia ရပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးအဆာဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်သင်မြို့သူမြို့သားတစ်နှစ်ခွဲနေ့ကခရီးစဉ်အပေါ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွက် Bur ဒူဘိုင်း Creek အဘိဓါန်, Spice စျေးကွက်ရန်သင့်အားကြာပါသည်။ သင်က Burj al-Arab, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသာ7ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်နှင့်အတူတစ်-Stop ဓာတ်ပုံရိုက်ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေသင်လူအားပယ်ဦးအုန်းကျွန်းနှင့်၎င်း၏လှည့်ခံရသောဘုန်းအသရေ, အ Atlantis စွန်ပလွံဟိုတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါခရီးစဉ်၏မြင့်အမှတ်ကျိန်းသေသည့် spotlessly အဖြူ Jumeirah ဗလီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘောင်းဘီတို, နောက်ကျောနှင့်လက်နက်ဖုံးလွှမ်းထားရမည်နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပုဝါနှင့်အတူမိမိတို့ခေါင်းပေါ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုအပ်ပါသည်မဝတ်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဒီခရီးစဉ်၌သင်တို့လည်းမိမိတို့၏ရိုးရာဗိသုကာနှင့်အတူဟောင်းအာရေဗျအိမ်များသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။
ညဦးယံ၌သင်တို့ကိုဒူဘိုင်း Creek အဘိဓါန်အပေါ်တစ်ဦး Dhow ခရုဇ်တို့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ Dhows ရာစုနှစ်နီးပါးမပြောင်းလဲရှိနေဆဲပြီရိုးရာ Arabic အဘိဓါန်ရှကျလှေဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအပျော်စီးဒူဘိုင်း၏အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်မှောက်ပေးထားပါတယ်။ တဦးတည်းအခြမ်းတွင်, အားလုံးလက်တွေ့ကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, 1990 ရဲ့မရောက်မှီတိုင်အောင်, ဒူဘိုင်း၏တစ်ခုလုံးကိုမြို့ဖြစ်သည့် Deira ဖြစ်ပါသည်။ အခြားဘက်ခြမ်းတွင်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်လမ်းများနှင့် Ultra-အရပ်ရှည်ရှည်မိုးမျှော်တိုက်နှင့်အတူခေတ်မီဒူဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညစာ (ဘူဖေး) ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် dhow ဖြစ်လိမ့်မည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်, သင်သည်သင်၏ကန္တာရ Safari ကစတင်ဖို့။ သင့်အနေဖြင့်သဲကန္တာရမှသယ်ယူပို့ဆောင်နေကြသည်။ ပြန်ထိုင်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များမစိုက်သဲခုံကိုတက်ဘယ်လိုပျော်မွေ့။ သငျသညျအလိုတော်ရှိလျှင်, သဲခုံ-bashing! နေရောင်အမြင့်ဆုံးသဲသဲခုံပေါ်ကနေထံမှမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကျော်ဆင်း Watch ။ အဆိုပါလိမ္မော်ရောင်နေဝင်ချိန်လည်းအများအပြားအမှတ်ရစရာမိသားစုဓာတ်ပုံတွေအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောနောက်ခံစေသည်။ အဆိုပါ swanky မော်တော်ယာဉ်လည်းခေတ်မီပုံရသည်ဆိုပါကတစ်ဦးကုလားအုပ်စီးယူပါ။ သင်တို့သည်လည်းဟင်္ဒီဇိုင်းနှင့် sheesha တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးအတွက်လုပ်ကြနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဝမ်း dancer သူမ၏အလှနျပူရွေ့လျားခြင်းနှင့်တကွသင်ဖျော်ဖြေနေစဉ်တစ်ဦးကကင်ညစာတစ် starlit အာရေဗျမိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အံ့ဖှယျညဦးယံအချိန်အဆုံးသတ်မှကြွလာသည့်အတိုင်း, သင်သည်သင်၏ဟိုတယ်ပြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ကြသည်
သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့ Burj Khalifa, ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုယူကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထင်ကြီးသို့မဟုတ် preposterous ကြောင့် Call မရှိ Burj Khalifa ဗိသုကာနှင့်အင်ဂျင်နီယာတစ်မြေပြင်ကိုချိုးဖောက် feat ကြောင်းငြင်းပယ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦ 828m (Big Ben က၏ခုနစ်ကြိမ်အမြင့်) မှာကောင်းကင်ပြာ pierces နှင့်တူးဖော်စတင်ခဲ့ပြီးသာခြောက်နှစ်ပြီးနောက်,4ဇန်နဝါရီလ 2010 အပေါ်ဖွင့်လှစ်။ 13,000 လုပ်သားများမှတက်ကြိမ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာသုံးအဖြစ်နေ့ရက်ကာလ၌သစ်တစ်ခုကြမ်းပြင်အထိချပြီးမှာ, နေ့နှင့်ညဉ့်ကြိုးစားအားထုတ်။ အဓိကဆွဲဆောင်မှုကတော့ 124th ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာက 'ထိပ်တန်းမှာက' တိုင်းထွာအလှဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောမြတ်သောအထွဋ် မှစ. သင်အလွယ်တကူအဆိုပါ World, သုံးအုန်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အခြားအထင်ကရအဆောက်အအတိအကျရှာရန်နိုင်ပါတယ်။ သင် whisks ကြောင်း 10m စက္ကန့်လျှင်တစ်ဦးတစ်ခုလုံးကိုမိနစ်များအတွက်လေထဲတွင်တစ်ဦးမြတ်သော 124m မှာအဆငျ့ 442 ရောက်ရှိဖို့တစ်ဦးကို double-ကုန်းပတ်ဓာတ်လှေကားမှအမျိုးမျိုးသောမာလ်တီမီဒီယာပြပွဲအတိတ်အဲဒီမှာကြာတဲ့။ အဆိုပါခရီးစဉ်၏အဆုံးမှာ, သင့်ဟိုတယ်ကိုပြန်လာ
မဲနယ်လေကြောင်းလိုင်းအပေါ်စီးပွားရေး airfare ပြန်သွား
4 Nights / 05 ရက်ပေါင်းနေရာထိုင်ခင်း
ဆစ် (ထိုင်ခုံနည်းပြ၌) အပေါ် အခြေခံ. လေဆိပ်လွှဲပြောင်းပြန်သွား